Kadhi reIsita rakagadzirwa nemapepa ane mavara | Inobatsira ruzivo kune wese munhu
Unyanzvi hwedu hwanhasi huchave hwakakumikidzwa kuna Isita... Chichava kadhi repositi rakagadzirwa nemavara mapepa uye yakaratidzwa mune ino tenzi kirasi.
Kugadzira hunyanzvi hwakadai hweIsita, tinotora:
nhema inzwa-tip peni;
Hwaro hweposikadhi redu richava pepa regirazi girini. Isu tinopeta-peta iro rinosvika nehafu.
Cheka chikamu chimwe muzvidimbu nekasi. Mune ino kesi, isu hatisvike inosvika 2 cm kusvika kunzvimbo yedanga.
Dzorera imwe neimwe yezvimedu. Izvi zvirinyore kuti zviitwe nezino rezino kana tsvimbo yehuni. Aya ndiwo maratidziro atakaita hwaro hweIsita kadhi.
Pasi, tichaishongedza nemutsara wepepa repingi. Tinoipfuudza nepakati pemitsetse yakasvibira yakatemwa, uye tobva tagadzirisa neglue pamwe chete nemipendero.
Tevere, isu tinofanirwa kucheka matatu akafanana rectangles kubva mutsvuku, chena uye yero bepa. Saizi yavo ndeye 3x7 cm.
Cheka oval isina chinhu kubva kune imwe rectangle.
Tinoda chena chigadziko kuti tigadzire bunny. Kwaari, isu takagura dzimwe nzeve kubva papepa chena uye nekudzishongedza neepinki ruzivo.
Dhirosa kumeso nepeni nhema-yekunzwa peni uye wedzera madiki akakomberedza matama akachekwa kubva kupinki bepa.
Iyo yero oval ichava huku mune yedu kadhi-kadhi. Isu tinonamira muromo mutsvuku wakatemwa muchimiro che rhombus yakapetwa nehafu. Uye nepeni nhema-yekunzwa peni tinodhonza maziso nemapapiro. Wedzera tuft diki rakatemwa kubva kune yero bepa.
Oval tsvuku isina chinhu icharamba iri mune ino fomu, rinenge riri zai. Isu tinonamira zvese zvakadzama pachigadziko chakasvibira, tambosimudza chikamu chakamonyoroka. Yakadaro kadhi reIsita rakagadzirwa nemapepa ane mavara rakabuda.
Crochet Isita Doily
Chii chekupa yePasika
Akanaka uzviite iwe pachako Pasika compositions
Mibvunzo ye59 mu database yakagadzirwa mu 0,526 masekondi.